Manerana ny Nosy : 56 ny sekoly manofana ho paramédicaux manana « habilitation » | NewsMada
Manerana ny Nosy : 56 ny sekoly manofana ho paramédicaux manana « habilitation »
Ho fitandroana ny ain’ny marary karakarain’ny « paramédicaux », tokana ny fanadinam-panjakana hanomezana ny « licence » manomboka amin’ny taona 2017. Hanavahana ny sekoly manana « habilitation » no tanjona satria betsaka ny ivontoeram-pampianarana tsy manara-dalàna misokatra etsy sy eroa.
« Manankery ny mari-pahaizana licence nomen’ny sekoly tsy miankina ambony manofana ho paramédicaux raha nahazo « habilitation » ny tolotra fampianarana natolony ny mpianatra », araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny fampianarana ambony, ao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony, Randrianambinina Blanchard, omaly teny Fiadanana. Amin’izao fotoana izao, 56 ny ivontoeram-pampianarana ho paramédicaux manana tolotra fampianarana manana « habilitation » manerana ny Nosy.
Manomboka amin’ny 2017, tokana ny fanadinam-panjakana ahazoana ny mari-pahaizana licence amin’ny science de la santé. Hisy fandaharam-pianarana tokana avy amin’ny fakiolten’ny fianarana ho mpitsabo tsy maintsy arahin’ny sekolim-panjakana sy ny tsy miankina mampianatra ho paramédicaux. « Hanomboka amin’ny taona voalohany hatrany amin’ny taona fahatelo fa mandeha tsikelikely ny fandaharam-pianarana tokana », hoy ny teknisianina.
Mandinika ny fomba hirosoana amin’ny fanadinana tokana ny mpikambana amin’ny commission de réference des formations en médecine, omaly. Tafiditra amin’ny vaomiera ny doyen-n’ny fakiolten’ny fianarana ho mpitsabo enina, ny filohan’ny holafitry ny mpampivelona, ny filohan’ny holafitry ny infirmiers, ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fampianarana ambony, ny solontenan’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Afaka telo herinandro ny fandinihana ny fotoana handraisana ny fisoratana anarana ho an’ny mpiadina. Mbola nanamafy ny tale jeneralin’ny fampianarana ambony fa ireo mpianatra avy amin’ny sekoly manana tolotra fampianarana « habilités » ihany no afaka miatrika ny fanadinam-panjakana tokana amin’ny 2017.
Tsy maintsy mangataka ny « habilitation » any amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony ny sekoly rehetra maniry ny hisokatra satria efa tsy misy intsony ny « autorisation d’ouverture » sy ny « homologation ».